Firming Fluffing Silicone emulsion Factory nePricelist | Honneur
Sebenzisa: I-Fluffing Silicone emulsion PR160 is a organic silicone emulsion ekhethekile kanye nezinto eziyisihluthulelo eziyisisekelo zohlelo lokuhlanganisa iRagency Agent ngendwangu ebunjiweyo. Ingasetshenziselwa ukukhulisa, ukugunda, ukuqeda ukotini, i-T / C, i-polyester, i-nylon nezindwangu zayo ezihlanganisiwe. ifaka isibambo esihle kakhulu, esithambile, esibushelelezi futhi esinamandla okuthe xaxa kwendwangu ephakanyisiwe. Ingasetshenziswa ngokuhlanganiswa ne-flake emulsion ngezindlela ezihlukile ngokuya ngesimo sendwangu.
Ukubukeka: I-Milky white liquid
Okuqukethwe okuqinile: 60%
Ionicity: okungelona i-ionic
Sebenzisa: I-Fluffing Silicone emulsion PR160 i-organic ekhethiwe ye-silicone ekhethekile kanye nezinto eziyisihluthulelo zohlelo lokuhlanganisa UkukhulisaUmenzeli wendwangu ebanjiwe. IngasetshenziselwaUkukhulisa, Ukucheba nokuqothula kokuqeda kukotini, i-T / C, i-polyester, i-nylon nezindwangu zayo ezihlanganisiwe. ifaka isibambo esihle kakhulu, esithambile, esibushelelezi futhi esinamandla okuthe xaxa kwendwangu ephakanyisiwe. Ingasetshenziswa ngokuhlanganiswa ne-flake emulsion ngezindlela ezihlukile ngokuya ngesimo sendwangu.
Indwangu eboshwe yenziwa ngenqubo yokuthwebula, ebizwa nangokuthi ukuphakamisa noma ukuxubha. Ingaphezulu lendwangu elukiwe noma elukiwe liphathwa ngemabhulashi ukwakha ukuthungwa okuthambile, okubabazekayo. Izibonelo ezijwayelekile zifaka i-flannel, moleskin, noboya be-polar.
I-fleece yenziwa ngokushaya indwangu ye-polyester ephumela ekuqineni kogqinsi futhi isungula namaphakethe womoya okufakwa. I-Fleece inikezela isilinganiso esifudumele sokufudumala-kuya kwesisindo ngokuqhathaniswa noboya beMerino kodwa esingaphansi kwesisekelo se-goose phansi noma sokwenza izinto zokugcwalisa zokwenziwa.
I-Napping inqubo engasetshenziswa ku-woollens, cottons, spun silks, kanye ne-spun rayons, kufaka phakathi zombili izinhlobo ezelukiweyo futhi ezinemikhono, ukukhulisa i-velvety, indawo ethambile. Le nqubo ifaka ukudlulisa indwangu phezu kwama-cylinders ajikelezayo ambozwe ngocingo oluhle oluphakamisa imicu emifushane, evulekile, imvamisa ukusuka ezintanjeni zeft, ebusweni, yakha inhlaka. Inqubo, ekhulisa ukufudumala, imvamisa isetshenziselwa uvololens kanye nama-borandi futhi nasezingubo zokulala.
Ukubukeka: I-Milky white ketshezi
I-Ionicity: okungeyona i-ionic
Inani le-PH: 6 ~ 8
I-Solubility: inyibilika emanzini
1. Umphumela omuhle othambile, obushelelezi no-fluffy ozwakalayo, yenza indwangu ibe lula ukuqina；
2. Inomphumela omncane emthunzini wombala, ubumsulwa nokuqina kwemibala
3. Ngemuva kokuqeda, ingaphezulu lendwangu libushelelezi, li-plush ngisho, lithola inqwaba eminyene, efanayo
4. Ingasetshenziswa nabaningi abasebenza ngokugcotshwa kwama-silicone nezinye izinsiza zezindwangu kubhavu olulodwa, kabanzi
isetshenziswa inqubo yokuqeda
Esitsheni, hluza i-flake ngamanzi ashisayo bese uyihlanza ngokuphelele. Ngemuva kwalokho, engeza i-Fluffing
I-Silicone Emulsion ngokwesilinganiso, siyivuse ngokulinganayo futhi siyisebenzise ngemuva kokuhlunga
1. Indwangu yelop yePolyester (inqwaba yamakhorali noboya bekhotho)
Weak cationic flake 25kg, engeza i-PR160 mayelana ne-50kg, ihlanganiswe ne-1000kg; Umthamo: 40-50 g / l
2. Ukotini owenziwe ngendwangu
Weak cationic flake 40kg, engeza i-PR160 mayelana ne-70kg, ihlanganiswe ku-1000kg; Umthamo: 40-50 g / l
3. Indwangu elukiwe ye-T / C (80/20 noma 65/35)
Ubuthakathaka be-cationic flake 30kg, engeza i-PR160 mayelana ne-70kg, kuhlanganiswe ku-1000kg; Umthamo: 40-50 g / l
4. I-DTY (Gwala indwangu yokufaka umbhalo) indwangu elukiweyo
Weak cationic flake 25kg, engeza u-PR160 mayelana ne-50kg, engeza i-block silicone emulsion 10-20kg,
kuhlanganiswe ku-1000kg; Umthamo: 40-50 g / l;
Ngendwangu ehlanganisiwe, buyisela i-flake ebuthakathaka nge-flake engeyona eye-ionic
Qaphela: imininingwane engenhla ingezereferensi kuphela, ngokuya ngenqubo uqobo
Ukupakisha: Kunikezwe ku-200kg Drum noma ku-1000kg IBC
Impilo esezingeni eliphansi lezinyanga eziyishumi nambili kusukela ngosuku lokukhiqizwa futhi igcinwe kokungavinjelwanga kwasekuqaleni
isitsha ngo-2℃~ 30℃. Sicela ubheke isincomo sokugcina nesikhathi sokuphelelwa isikhathi ngalo
Esedlule: I-D4 D5 D6 Siloxanes yamahhala
Ukucheba & Ukuqhamuka ne-ejenti yokuqedela; i-fluffing abicah emulison
I-ejenti yokuhlakaza ejwayelekile yokufaka udayi
I-ejenti yokulinganisa ye-acid nedayi yangaphambi kokubumba